ဘဝက hacking: အွန်လိုင်းဇီယာကိုဝယ်ဖို့ဘယ်လို
ဣတ္ Be - တစ်အနုပညာ, စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတိုင်းလမ်းအတွက်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရပါမည်။ အကြောင်းမူကား, ထိုကဲ့သို့သောအတွင်းခံအဝတ်အစားများရွေးချယ်မှုအဖြစ်အရေးကြီးသောအရာများကိုလစျြလြူရှုမထားပါနဲ့။ ဇိမ်ခံနှင့်ကြော့အတွင်းခံအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့လိင်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုသံသယယုံကြည်မှုနှင့်မခံစားရရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါအမျိုးသမီးရင်သားကိုအမြဲတစ်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်နှင့်အထီးအနေဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၏အရာဝတ္ထုခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, မတိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးသဘောသဘာဝစုံလင်သော rounded ပုံသဏ္ဍာန်ပေးသနားတော်မူ၏။ ဒါပေမယ့်နိုင်ဘရာစီယာ၏ရှေးခယျြမှုမှချဉ်းကပ်လျှင်ဤပြဿနာကိုအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်ပါသောကွောငျ့, ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်၏ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့မစဉ်းစားကြဘူး။ မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်တော်မူဘရာစီယာဂုဏ်သိက္ခာကိုအလေးပေးနှင့်အပြစ်အနာအဆာဖုံးကွယ်ဖို့နှစ်သိမ့်, ဒါပေမယ့်လည်းအကျိုးရှိသောသာပေးလိမ့်မယ်။
ဒါဟာကောင်းတဲ့ဘရာစီယာတှေ့စျေးဆိုင်များတွင်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအကွာအဝေးနှင့်အတူသိပ်မခက်ခဲကြောင်းပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ကိုသာကုန်တိုက်များတွင်စျေးဝယ်များအတွက်တင်သွင်းဖို့, တကယ်တော့ကရှေးခယျြမှုအလွန်ကန့်သတ်ကြောင်းပေါ်လာသည်။ စံအရွယ်အစားအတွက်အသုံးအများဆုံးမော်ဒယ်: ဆိုင်မှာတော့အခြေခံအားဖြင့်တဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးဘရာစီယာရွေးချယ်ဖို့ Non-က default settings ကိုအတူမိန်းမတို့အဘို့အမှန်တကယ်မရှိ။ အော့ဖ်လိုင်း store မှာစျေးနှုန်းဆိုင်များအတွက်ထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားနေကြသည်ဟူသောအချက်ကိုဖော်ပြခြင်းမ။ ထို့ကြောင့်, ပိုပိုပြီးအမျိုးသမီးတွေအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ကြိုက်တတ်တဲ့။ ဥပမာ, ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်ဗစ်တိုးရီးယားလျှို့ဝှက်အတွင်းခံတစ်ဦးကအလွန်ကျယ်ပြန့်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်များအစုလိုက်အပြုံလိုက် Market က H & M ချုပ်ထိန်းထားသည်နှင့်အစခွေငျးငှါလည်းအံ့သြစရာဝယ်စိတ်ဝင်စားဖို့မော်ဒယ်များ။
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်ဘရာစီယာအမျိုးအစားကိုသင့်ရဲ့အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်အဖြစ်အခြားဘယ်အရာကိုဿုံကုန်ပစ္စည်းများသို့ရောက်လာသည်နှင့်၎င်း၏မွေခံရသောသူကိုအလိုရှိတဲ့ဘရာစီယာကိုဝယ်ယူသည့်အခါအဘို့အကြည့်ဖို့သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ဂရုတစိုက်ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်အသုံးပြုပုံအတွင်းခံအဝတ်အစားရုတ်သိမ်းရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုထောက်ပံ့အတူမသာအဆင်ပြေ, သာယာလှပသော, ဒါပေမယ့်လည်းအဆင်ပြေဖြစ်သင့်သည်။
လက်ရှိများစွာသောဇီယာကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ, အရောင်များ, အထည်, တစ်ခါတစ်ရံအလွန်ခက်ခဲထုတ်ကုန်နှင့်အတူဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်အတူ; မကြာခဏရွေးချယ်မှုအဆင်ပြေဆန့်ကျင်သည့်ဒီဇိုင်းနှင့်အမြင်အာရုံအယူခံဝင်များ၏မျက်နှာသာအတွက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးတိပ်တွေနဲ့တိုင်းတာစေရန်သေချာစေပါဝယ်ဖို့ခြင်းမပြုမီ။ ဒါဟာအတော်လေးလွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပြီး, သတင်းအချက်အလက်များသင့်လျော်သောအဝတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ unerringly အနာဂတ်၌သင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ရမှတ်ထုတ်လုပ်တဲ့အားဖြင့်ရင်ပတ်အောကျတှငျအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ရင်သားကင်ဆာအသံအတိုးအကျယ်ကိုသိရန်လိုအပ်ပေသည်။ အဲဒီနှစျခုကိန်းဂဏန်းများအက္ခရာများ (ခွက်ကိုအရွယ်အစား) နှင့်နံပါတ်များကို (နို့ girth အောက်မှာ) ၏ဖွင့်ကိုဖန်ဆင်းသော, သင် marking ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, 75 စင်တီမီတာ၏လုံးပတ်နှင့်ခွက်ကိုအရွယ်အစားတန်ဖိုး B, 75B ရရှိသောဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မှန်ကန်သောဘရာစီယာအရွယ်အစားနှင့်ညီမျှသည်လျှင်။
အောက်ပါကျောက်ပြားကို, သူတို့ကအတော်လေးအလွယ်တကူ resolution ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ယင်း၏ parameters တွေကိုများ၏တိုင်းတာခြင်းစဉ်အတွင်းလိမ်သောတိပ်အတိုင်းအတာကိုခန္ဓာကိုယ်မှတင်းကျပ်စွာနဲ့ဘယ်တော့မှသတိပြုပါ, ထို့နောက်တန်ဖိုးများကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများ၏စာမျက်နှာများအတွက်အားလုံးနီးပါးစျေးဆိုင်ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာ table ၏အဆင်ပြေဘို့တင်ပြနေကြပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှု kalkuryator အရွယ်အစား "ဟုဘရာစီယာရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်လက်ထောက်" ဇီယာ bonprix ဆိုင်၏အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကျနော်တို့အထက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြရာနှစ်ခုသာ parameters တွေကိုဝင်များနှင့်အနည်းငယ်အချက်များကိုတစ်ဦးကို tick ချမထားချင်ရာအလွန်အဆင်ပြေပြေနဲ့အသုံးဝင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့များ၏အတိအကျကိုအရွယ်အစားမသာပြသပေမယ့်သင်တို့ကိုလည်းသင့်လျော်ရာဇီယာ၏တစ်ဖွဲ့လုံးရွေးချယ်ရေးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ အလွန်ကျယ်ပြန့် bonprix အတွက်အဝတ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်သင်ဂန္ထံမှစတိုင်ဣတ္, curvy မော်ဒယ်များမှအခက်အခဲမရှိဘဲကွဲပြားခြားနားသောအတွင်းခံကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးအတွင်းခံစျေးကြီးဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အရွယ်အစားဿုံထိုင်ပြီးအဖြစ်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်အောင်ဖြစ်ရပါမည်။ ဒါဟာမလိုအပ်ပါဘူးဘယ်မှာမသမာမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဖန်တီးပေးသောတင်းကျပ်စွာသောအရာတို့ကိုအောက်တွင်အရောင်အဆင်းပိတ်ချောကိုရှောင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအဝတ်အစားအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောချောမွေ့ချောမွေ့စွာအတွင်းခံအဝတ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအသင်သည်သင်၏လက်နက်တိုက်၌ဤအမှု၌အနည်းငယ်ထွန်းလင်းဝတ်စားဆင်ယင်လျှင်ဘရာစီယာနှင့် panties အသားအရေအရောင်အစုတခုဖြစ်သင့်သည်။
Push-Up ။ ဘာသာပြန်ချက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့်အတူ "တိုးမြှင့်, မြှင့်" ကဲ့သို့အသံ။ ဤသည်ဆီလီကွန်သို့မဟုတ်ရေမြှုပ်ထားခွက်သို့အပိုဆောင်း INSERT ကြောင့်ဘော်လီရင်ဘတ်၏အရွယ်အစားကိုကျယ်ဝန်းစေ။ push-တက်သေးငယ်တဲ့ပုံစံမျိုးစုံဒါမှမဟုတ် silhouette ပိုပြီး appetizing စေရန်ဆန္ဒရှိသူတို့နှင့်အတူအမြိုးသမီးမြားအကြားရေပန်းစားသည်။
Balconette ။ အဘယ်သူ၏ခွက်လုနီးပါးရင်ဘတ်ဖွင့်လှစ်, အလွန်နိမ့်များမှာအလွန်လိုက်စားခြင်းနှင့် seductive ဘရာစီယာ။ ခွက်၏အောက်ခြေတွင် Balkonet "သွေ့ခြောက်သောအရိုး" ၌နေရာချနေကြတယ်, သူတို့ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ရင်သားကိုချီရသည်။ ဤသည်ဘရာစီယာပျော့ပုံစံများနှင့်အတူမင်းသမီးကိုကောင်းစွာသင့်လျော်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ရင်သားတစ်ဦးဘရာစီယာမထားနိုင်ပါ။
ပျော့ပျောင်းသောခွက်ကို seedless အတူ။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကိုယ်နှိုက်များအတွက်ပြော၏။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမဘရာစီယာ INSERT နှင့်တင်းကျပ်စွာ calyx ။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူလုံးဝကျေနပ်မှုရှိပါသလဲနှင့်ထောက်ခံမှုလိုအပ်နှင့်ရင်သားကင်ဆာညှိကြဘူးသောမိန်းမတို့ကရွေးချယ်ထားသည်။
ဗန်။ elastic ထည်ချုပ်၏စံပြ။ တစ်ဂိုဏ်းထဲမှာထည်အနည်းငယ်ဗဟိုမှာစုဝေးစေနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ဘရာစီယာအဖြစ်, အသေးစားရင်သားနှင့်အတူအမြိုးသမီးမြားအဘို့အသင့်လျော်သည် ပို curvaceous ကိုယ်စားလှယ်များရန်လိုအပ်သောသော function ကိုထောက်ပံ့မပေးပါဘူး။
သော Corbeil ။ အမြင်အာရုံဆင်တူ balconette မော်ဒယ်, ဒါပေမယ့်သူကတဦးတည်းထူးခြားတဲ့ feature ကိုရှိပါတယ် - ရင်ဘတ်ဖုံးလွှမ်းပြီး seductive cleavage ဖန်တီးသောတင်းကျပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ထက်သော Corbeil အနည်းငယ်ပို။ ဤသည်ဘရာစီယာ V-လည်ပင်းနှင့် neckline နှင့်အတူအဝတ်အောက်မှာကောင်းသောကြည့်ရှုသည်။ သေးငယ်တဲ့အနေဖြင့် Non-စံဖို့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သော။
တစ်ဇောက်ချပါဝင်လာ neckline အတူ။ တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွဲထားတဲ့ bra ခွက်များ, အလွန်နိမ့်သည်ကအကောင်းဆုံးနက်ရှိုင်း neckline နှင့်အတူအဝတ်အစားဝတ်ဆင်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါတယ်။ အဖြစ်, သေးငယ်တဲ့ရင်သားအဘို့သင့်လျော်သော ဒါဟာလုံလောက်ထောက်ခံမှုပေးမထားဘူး။ အံ့မခန်း cleavage အတူညနပေိုငျးဆင်မြန်းများအတွက်တစ်ဦးကအလွန်ကြီးစွာသော option ကို။
Bralett ။ ဒီအရာတေးသံဘရာစီယာ-ထိပ်တန်းဇာသို့မဟုတ်ပိုး၏ လုပ်. , ချွတ်ချွတ်။ Size ကိုဇယား bralettov အဝတ်အစားတွေ၏အရွယ်အစားနဲ့ကိုက်ညီဒါကြောင့်အရွယ်အစားနှင့်အတူတစ်ဦးအမှားလုပ်လက်တွေ့ကျကျမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကအတွင်းခံအဝတ်အစားသေချာပေါက်လုံးဝအဝတ်အစားအောက်မှာဖုံးကွယ်မထားဘူး, က unbuttoned ရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်တဦးတည်းပခုံးကိုအုပ်စိုးထိုးပြီးဆွယ်တာအင်္ကျီနှင့်အတူအရည်ရွှမ်းပြပွဲရှိနိုင်ပါသည်။ Bralett စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ coquettish vyglyanuvshaya အသေးစိတ်ကဲ့သို့သူ၏ဂျာကင်အင်္ကျီအောက်မှာနှင့်သူမ၏စားဆင်ယင်မှုအောကျလှပါတယ်။ အဆိုပါပုံရိပ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာလှည့်လျက်နှင့်မမှာအားလုံးအောက်တန်း။
အဆိုပါအတွင်းခံပြန့်ပွားဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် stylist တွင်အတွင်းခံအဝတ်အစားအစုတခုဝယ်ယူရန်အကြံပြုပါသည်။ ဒါကစတိုင်ကြည့်, ဒါပေမယ့်လည်းသူမ၏အလှအပနှင့်လိင်အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးယုံကြည်မှုအများကြီးပေးသည်သာ။ အတွင်းခံအဝတ်အစားများ complete အစုံလည်းအွန်လိုင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါအလွန်အဆင်ပြေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စတိုးဆိုင် quelle.ru အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအစုံတင်ဆက်နှင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အခြေခံများနှင့်အထူးအခါသမယများအတွက်သှေးဆောငျအဖွစျ။ ဆိုင်အွန်လိုင်း lamoda.ru လှပသောအစုံအပါအဝင်အတွင်းခံအဝတ်အစား၏ကြီးမားသောဌန်, နှစ်သက်တော်မူ၏။ တချို့ကအမှတ်တံဆိပ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပိတ်ချောကိုရောက်စေဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုပေး။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆိုက်အချို့မော်ဒယ်များအလိုအလျှောက်ကောင်းတဲ့ set ကိုရဖို့သင့်လျော်တဲ့ဘောင်းဘီအကြံပြုပါလိမ့်မယ် bonprix ။ ရောင်းဖို့အာရုံစိုက်: အချို့မော်ဒယ်ဘရာစီယာနှင့် panties ပေါ်ဤအကြောင်းပစ္စည်းများအဘို့အလွန်ကောင်းတဲ့လျှော့စျေးရှိပါတယ်။
ဇိမ်ခံနှင့်အဆင်ပြေအတွင်းခံ - သည်အမျိုးသမီး၏ဗီရိုထဲမှာ fad, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးလိုအပ်သောအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တင့်တယ်သောပိတ်ချောအများကြီးဖြစ်ပျက်, ဒီတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကဒီနည်းနည်းဇိမ်ခံခွင့်ပြုပါနှင့်သင်၏အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ပျော်စရာများနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်ကြကုန်အံ့မထားဘူး။
ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် School တွင်အင်္ကျီ
တစ်ဦး fluffy အင်္ကျီနှင့်အတူဖောင်-သငျ့စားဆင်ယင်
Wraparound စားဆင်ယင် - စိတ်ဝင်စားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဝတ်ဆင်နည်း
အကျီ Montclair - ဤရာသီ၏အများဆုံးစတိုင်မော်ဒယ်၏ဓါတ်ပုံများကိုတစ်ရွေးချယ်ရေး
နှင်းလျှောစီး Bansko, ဘူလ်ဂေးရီးယားနှုနျး
Socialite diva Kim Kardashian ကတစ်ပွင့်လင်းစားဆင်ယင်အတွက်အများပြည်သူထံသို့ ဝင်.
ပျားရည် Dandelion - စာရွက်
ရှာလကာရည်အတွက် marinated ကြက်သွန်နီ
သစ်ကုလားအုပ်တစ်ကောင် Center က "Langata »
မြို့ရိုးအဘို့သားသမီးရဲ့ဝေါလ်ပေပါ - ဘယ်လိုပျိုးခင်းအတွက်အလွလေထုဖန်တီးနည်း
ဆံပင် linseed ရေနံနှင့်အတူ Mask
ငါးမွေးကန်များအတွက် silicone - အသုံးပြုမှုနှင့်ရွေးချယ်ရေးအပေါ်အကြံပြုချက်များ
Nina Dobrev နှင့် Austin Stowell
Delightfully အရသာဖုတ်ငါးချက်ပြုတ်နည်းများ - သတ္တုပါးအတွက်မီးဖိုတဖို၌ Sudak